Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle oo gargaar cunto ka qeybiyay Dagmada Mahadaay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle oo gargaar cunto ka qeybiyay Dagmada Mahadaay
Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle oo gargaar cunto ka qeybiyay Dagmada Mahadaay
Maamulka Hirshabelle ayaa gaarsiiyay maanta gargaar cunto ah qoysas ku nool qaar ka mid ah tuulooyinka ay saameeyeen fatahaada biyaha ee degmada Mahaday gobolka Sh/dhexe.
Qoysaskan ayaa ka kala yimid illaa toddobo tuulo oo ka mid ah deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen ee degmada Mahaday.
Deeqdan oo ka timid dalka Cummaan ayaa waxaa qeybinteedii goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen,Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Caadle,Kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cabdi Maxamed Sheekh iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa u mahad celiyay dowlada Cummaan oo deeqdan ka timid,waxana uu sheegay in ay tahay tii ugu horeysay ee ay gaarsiiyaan qoysaska uu saameeyey fatahaada wabiga biyaha ayna jiraan kumanaan qoys oo u baahan gargaar.
“Waxaan maanta bilownay gargaarka dadka fatahaaduhu saameeyeen waxaana aan ballanqaadeynaa in si ammaan ah loo gaarsiin doono qoysaska dhibaatadu hayso.”ayuu yiri Cali Guudlaawe Xuseen Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Qoysaska la gaarsiiyay deeqdan ayaa kamahadceliyay iyagoo sheegay in ay heleen xilligii loo baahnaa.
Tuulooyin faro badan oo ku yaal hareeraha wabiga Shabelle ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaada wabiga Shabelle.
Previous articleWaa maxay sababta Beesha Caalamka uga gaabsatay in ay xusto mucaaradka dowlada
Next articleSomaliland oo ku gacan seertay RW. Abiy Ahmed & Amb. Donald Yamamotto